WARKA 04:00 GMT
WARKA 11:00 GMT
WARKA 14:00 GMT
WARKA 18:00 GMT
WARKA 06:30 AM
WARKA 04:00 PM
WARKA 07:00 PM
UNIVERSAL TV (LIVE)
DHAGEEYSO:- Gabar sagaal sano jirta oo rag badan ay u isticmaaleen sida qof weyn (NAXDIN BADANAA).
May 10 2013 16:50:00
Waa arin aad iyo aad u naxdin badan fal wuxuushnimo ah oo ay ku kaceen rag la sheegay inay ku sugnaayeen degmada X/jajab ee magaalada Muqdisho ka dib markii gabar sagaal sano jir ah ay u isticmaalaayeen naag ahaan muddo aad u badan.
Jeneraal C/laahi Farataag oo ka hadlay dhaawacii loo geeystay Korneel Raadeer.
June 19 2013 08:52:00
Jeneraal C/laahi Sheekh Ismaaciil (Farataag) oo ah ku xigeenka Sheekh Axmed Madoobe ayaa ka hadlay dhaawaca maalintii shalay loo geeystay gudoomiye ku xigeenkii hore maamulkii KMG ee magaalada Kismaayo Korneel Yaasiin Cali Gaas (Korneel Raadeer), waxaana uu sheegay in warka sida loo buun buuninaayo aanu u ahayn.
Wasaarada arimaha gudaha ee dalka oo qorsheeynaysa habka ugu wanaagsan oo ay amaanka dalka wax uga qabaneeyso.
June 19 2013 08:15:12
Waxaa dhawaan la filaayaa in magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya lagu qabto shir looga hadlaayo amaanka dalka iyo qaabkii looga hortagi lahaay amaan xumida, iyadoona qaban qaabada shirkaasi ay wado wasaarada arimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dowladda Soomaaliya.
Kulan looga hadlaayay arimaha ka taagan Jubooyinka oo ka dhacay Muqdisho iyo qodobo laga soo saaray kulankaasi. June 19 2013 07:40:39
Kulan balaaran oo ay isugu yimaadeen beelaha Soomaaliyeed ayaa maalintii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, iyadoona kulankaasi ay ka hadleen mas'uuliyiin ka kala socoto beelahaasi.
Howlgalo dad badan lagu soo qab qabtay oo maanta ka socdo degmada X/weyne ee magaalada Muqdisho.
June 19 2013 07:38:15
Howlgalo culus ayaa saakay waxay soconayaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada X/weyne ee magaalada Muqdisho, iyadoona howlgaladaasi ay saameeyn xoogan ku yeesheen isku socodka gaadiid iyo dadweynaha ee halkaasi ka jiray.
Wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Kismaayo iyo sida ay caawa tahay.
June 18 2013 22:53:04
Warakii ugu dambeeyay ee laga helaayo magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ayaa waxay sheegayaan in xaaladda magaaladaasi ay caawa tahay mid degan ka dib israsaaseeyn xoogan oo maanta dhex martay ciidamo halkaasi ku wada sugan.
Mid ka mid ah askarta nabad sugida oo maanta Muqdisho lagu qaarjiyay.
June 18 2013 21:14:41
Kooxo hubeeysan ayaa gelinkii dambe ee maanta degmada Hodon ee magaalada Muqdisho ku dishay mid ka mid ah askarta ciidamada nabad sugida ee dowladda Soomaaliya.
DAAWO SAWIRO:- Baarlamaanka Soomaaliya oo markii ugu horeeysay ka qeyb galay shir ka dhacay magaalada Brussels.
June 18 2013 21:01:51
Wafdi ka socda baarlamaanka Soomaaliya ayaa markii ugu horeeysay bur burkii kadib ka qeyb galay ACP-EU oo ka furmay magaalada Brussels ee xarunta Midowga Yurub.
WAR DEG DEG AH:- Qarax xoogan oo ka dhacay xaafadda Cali Kamiin ee degmada Wardhiigleey.
June 18 2013 18:54:07
Warar goor dhaw naga soo gaaray xaafadda Cali Kamiin degmada Wardhiigleey ee magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in laba ka mid ah baalayaasha nalalka ee qoraxda ku shaqeeya oo ku yaala xaafadaasi ay qarxeen ka dib markii hoostooda miino lagu qariyay.
DAAWO SAWIRO:- Ra'iisul wasaare Saacid oo maanta furay shirka heer qaran ee dib usoo nooleeynta waxbarashada Soomaaliya.
June 18 2013 13:53:00
Raiisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shir heer qaran ah oo looga arrinsanayo dib u habaynta waxbarashada Soomaaliya, shirkaan ayaa lagu wadaa inuu socdo mudo saddex maalmood ah, waxaana soo qaban qaabiyey wasaaradda horumarinta iyo adeegga bulshada, hay�adaha UNESCO iyo UNICEF.
WAR DEG DEG AH:- Korneel Raadeer oo ku dhaawacmay israsaaseeyn dhexmartay ciidankiisa iyo kuwa Raaskambooni.
June 18 2013 12:51:55
Wararka haatan naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ayaa waxay sheegayaan in halkaasi goor dhaw lagu dhaawacay gudoomiye ku xigeenkii hore maamulka KMG ee magaaladaasi Korneel Yaasiin Cali Gaas (Korneel Raadeer), ka dib markii sida la sheegay uu isku dayay inuu la hadlo ciidamo gadoodsaan oo isbaaro dhigtay.
Faah faahin ku saabsan qarax maanta xaafadda Afmadoow lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa Kenya.
June 18 2013 12:27:32
Qarax miino oo aad u xoogan ayaa maanta lala eegtay kolonyo gaadiid oo ay la socdeen ciidamada Kenya ee AMISOM oo maraayay xaafadda Afmadoow ee magaalada Kismaayo, waxaana qaraxaasi ka dhashay qasaare xoogan.
Copyright � 2007-2013 Bulshoweyn.com | All Rights Reserved